Heart Museum: သခင် မရှိတဲ့မွေးနေ့
ဟိုးးးးး အဝေးက ပြည့်နေတဲ့
သခင်နဲ့ မခွဲ အမြဲတွဲ
သာစဲ သာမြဲ မပြောင်းလဲ
သခင် မရှိတဲ့ မွေးနေ့ အကြောင်းလာဖတ်သွားပါတယ် ။ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။
မွေးနေ့ရှင် ပျော်ရွှင်သလို မွေးနေ့ကို သတိရပေးသူလဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
(အစ်ကိုကြီး အညတရ အမှတ်တရတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။)
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဗျို့ :) နည်းနည်းတော့ နောက်ကျသွားတယ် အစ်ကိုရေ ... :P
မင်္ဂလာ ကိုဟ။ ဖတ်သွားတယ် သခင်မရှိတဲ့ မွေးနေ့ .. ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ..
him and her နာရီ ကြော်ငြာ ထင်လို့ ပါ။ ဘယ်လောက်ပေးရလဲဟင် ... ဟင်းဟင်း စတာပါ. အခန်းဆက်ဝတ္တုတောင် အပိုင်း၆ရောက်ပြီ.
Happy belated birthday Ko heart museum. I hope you haveawonderful years ahead. God bless you.
နားလိုက်လုပ်လိုက်ပေါ့ ဘုရားရှင်တောင်နားသေးတာပဲ ပြန်လာမဲ့အချိန်ကိုလည်းစိတ်ရှည်စွာစောင့် မျှော်ကြိုဆိုနေမှာပါပဲ အလှဲ့ ကျလုပ်ကြတာပေါ့နော့် 
မွေးနေ့မှသည် နှစ် ၁၂၀ ရှည်စေသော်
Happy Belated Birthday... အော်... အစွဲအလန်းကြီးလွန်းတဲ့ Heart ကြီးပါလာ.... အဆင်ပြေပါစေ ပျော်ရွင်နိုင်ပါစေကွယ်... မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေလဲ ပြည့်ပါစေနော်...
မွေးနေ့ ပို့ စ်လေးက သနားစရာ နေတက်ကျေနပ်နေပါ့မယ်တဲ့လားးးးးးးးးးးးးးးးးး
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာများကွာ....ပိုစ့်က july 18... july 15 ရက်ကလဲသူ့မွေးနေ့ပဲ... သတိရပေမဲ့ သူမသိအောင် စိတ်ထဲကပဲ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်... အစ်ကို့ကဗျာထဲကလို သူကတော့အသစ်တစ်ယောက်နဲ့ကျင်းပနေမှာပဲ..
အရမ်းကို မိုက်တယ် ကို Heart ကြီးရေ..
အဲလို ခု တစ်ကယ်ဖြစ်နေတာမို့ပါ..။
မွေးနေ့ရှင်ပျော်ရွှင်သလို မွေးနေ့ကိုအမှတ်တရနဲ့ ရှိနေတဲ့ အကိုပြတိုက်ကြီးဆီလည်း ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ အမြန်ဆုံးကျရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်...။
နေတတ် ကျေနပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် ကို အညတရ..။